Sele siwazi umhla wokukhutshwa kunye nexabiso leDoogee S98 entsha | Izixhobo zeNdaba
Sele siwazi umhla wokuqaliswa kunye nexabiso le-Doogee S98 entsha
UIgnacio Sala | 18/03/2022 13:16 | Iiselfowuni
Ngomhla we-28 kaMatshi, i-Doogee S98 iya kubetha imarike, i I-smartphone entsha ehexayo evela kumenzi uDoogee, eyaziwayo ifowuni erhabaxa, kwaye iya kukwenza oko ngexabiso elikhethekileyo lentshayelelo ye-239 yeedola, ixabiso lentshayelelo eliya kufumaneka kuphela phakathi kwe-28 kaMatshi kunye ne-1 ka-Aprili.
Ixabiso eliqhelekileyo lesi sixhobo yi-339 yeedola, ngoko ke unikezelo lwentshayelelo ivumela ukuba sigcine i-100 yeedola. Ukongeza, sinokuthatha inxaxheba kwi-draw ye-4 Doogee S98 ngewebhusayithi yayo. Ukususela ngo-Matshi 28 ukuya ku-Epreli 1, sinokuthenga i-Doogee S98 IRandi ye239 en AliExpress y doogeemall.
1 Isinika ntoni iDoogee S98
1.4 Ibhetri ukuya kwiintsuku ezi-3
2 Ungayithenga phi iDoogee S98
Indawo yokugcina I-256 GB USF 2.2 kwaye inokwandiswa nge-microSD
Isikrini 6.3 intshi - FullHD + isisombululo - LCD
abanye NFC - Android 12 - 3 iminyaka yohlaziyo
I-Doogee S98, ilawulwa yiprosesa IHelio G96 ukusuka kwiMediaTek. Kanye kunye neprosesa, sifumana i-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina, isitoreji esinokuyandisa ngokusebenzisa ikhadi le-microSD.
I-Doogee iquka izikrini ezi-2. Eyokuqala kunye nengundoqo inobukhulu be 6 intshi. Isikrini sesibini, siyifumana kwi umva kwaye inobungakanani 1,1 intshi.
Ngesi sikrini sangasemva, siyalibona ixesha, lawula ukudlala komculo, phendula iifowuni, jonga inqanaba lebhetri, bona imiyalezo esiyifumeneyo...
Ukuba yikhamera enye yamacandelo abasebenzisi abawathathela ingqalelo kakhulu, abafana baseDoogee baye bahlawula ingqalelo ekhethekileyo kuyo. Ngasemva kwesixhobo, sifumana Iilensi ezi-3:
64 MP main isivamvo
8 MP engile ebanzi kunye
Inzwa ye-20 MP yombono wasebusuku eyenziwe nguSony.
Ikhamera yangaphambili yenziwe yi-Samsung kwaye ine- Isisombululo se-MP eyi-16.
Ibhetri ukuya kwiintsuku ezi-3
Nge I-6.000 mAh ibhetri, i-Doogee S98 inokuzimela kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 ngokusetyenziswa okuphakathi kwesixhobo.
Iyahambelana ne- ukutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-33W, kunye netshaja efakiweyo yamandla afanayo. Ikwahambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ungayithenga phi iDoogee S98
I-Doogee S98 entsha iya kufumaneka kwi-Aliexpress kunye ne-Doogeemall kunye namakhonkco kwintshayelelo yenqaku. Xa ukunyuswa kokuqaliswa kuphelile, ixabiso liya kuba yi-339 yeedola. Ukuba uqoqosho lwakho alukuvumeli, unokufumana enye ye-4 Doogee S98 ukuba umenzi we-raffles kwiwebhusayithi yakhe kunye namakhonkco aboniswe ngasentla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Sele siwazi umhla wokuqaliswa kunye nexabiso le-Doogee S98 entsha
I-Roborock izisa ukuzikhupha kuluhlu oluphakathi ngokunjalo